Asura – MMANIME
Asura 09/29/2012 (JP)
PG 1h 16m Animation, Drama, History, Horror
Genres – Drama, Historical
Duration – 1 hr. 15 min.
Translated By – Izuna / Meaning checked By -Yamin / Encoded By – Hiro
[Zawgyi]_၁၅ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဟာ ငတ်မွတ်မှု ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ထွန်းတော့တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။1459နဲ့1461 ခုနှစ်ကြားမှာလည်း လူပေါင်း၈သောင်းကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီ့ခေတ်မှာပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဆာလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေပြည့်နေတဲ့မိန်းမကြီးကမွေးဖွားခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီကလေးကို သူမဟာ ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆာလောင်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံး ကလေးကို စားဖို့ကြိုးစားစဉ် ကောင်းကင်မှလာသော မိုးကြိုနှင့်အတူ တည်းခိုရာ ဇရက်မှာ မီးလောင်ပြီး မိန်းမဟာ ကလေးကိုစွန့်ပစ်ကာ အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့လေတယိ။
၈နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်လေးဟာပုဆိန်တစ်လက်နဲ့အမဲလိုက်ဖြတ်နေခဲ့တယ်။ သူဟာလူတွေကိုသတ်ပြီးလည်းစားခဲ့တယ်။ သူဟာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အသာလေးပဲခုခံခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကနေစရာနဲ့စားစရာတွေပေးပြီးကောင်လေးကိုAsuraလို့နာမည်မှည့်ခဲ့တယ်။
ကောင်လေးတစ်နေ့နားလည်မှာပါဆိုပြီးဘုန်းကြီးကဓမ္မစာပေတွေကိုလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်… ကောင်လေး Asura ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာပြီး ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့….အားလုံးပဲ video လေးကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့
[Unicode]_၁၅ရာစုနှဈအလယျပိုငျး ဂပြနျနိုငျငံကွီးဟာ ငတျမှတျမှု ရလှေမျးမိုးမှုတှကွေောငျ့ဘာမှမဖွဈထှနျးတော့တဲ့ဒသေတဈခုဖွဈသှားခဲ့တယျ။1459နဲ့1461 ခုနှဈကွားမှာလညျး လူပေါငျး၈သောငျးကြျောလောကျသဆေုံးခဲ့ရတယျ။ အဲ့ဒီ့ခတျေမှာပဲ ကောငျလေးတဈယောကျကို ဆာလောငျမှုတှဆေငျးရဲမှုတှပွေညျ့နတေဲ့မိနျးမကွီးကမှေးဖှားခဲ့တယျ။
အဲ့ဒီကလေးကို သူမဟာ ခဈြခဲ့ပမေဲ့ ဆာလောငျမှုကိုမခံနိုငျတဲ့အဆုံး ကလေးကို စားဖို့ကွိုးစားစဉျ ကောငျးကငျမှလာသော မိုးကွိုနှငျ့အတူ တညျးခိုရာ ဇရကျမှာ မီးလောငျပွီး မိနျးမဟာ ကလေးကိုစှနျ့ပဈကာ အဝေးကိုထှကျသှားခဲ့လတေယိ။
၈နှဈကွာပွီးတဲ့နောကျမှာကောငျလေးဟာပုဆိနျတဈလကျနဲ့အမဲလိုကျဖွတျနခေဲ့တယျ။ သူဟာလူတှကေိုသတျပွီးလညျးစားခဲ့တယျ။ သူဟာဘုနျးကွီးတဈပါးကိုတိုကျခိုကျခဲ့ပမေဲ့ဘုနျးကွီးကတော့အသာလေးပဲခုခံခဲ့ပါတယျ။ ဘုနျးကွီးကနစေရာနဲ့စားစရာတှပေေးပွီးကောငျလေးကိုAsuraလို့နာမညျမှညျ့ခဲ့တယျ။
ကောငျလေးတဈနနေ့ားလညျမှာပါဆိုပွီးဘုနျးကွီးကဓမ်မစာပတှေကေိုလညျးသငျပေးခဲ့တယျ… ကောငျလေး Asura ရဲ့အနာဂတျဟာ ဘယျလိုတှဖွေဈလာပွီး ဘယျလိုအဆုံးသတျသှားမယျဆိုတာကိုတော့….အားလုံးပဲ video လေးကွညျ့လိုကျကွတာပေါ့
Option 1 Mediafire 350MB 720p